Itekhnoloji ye-OTT ithatha njani iTV yakho | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 8, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UJeffrey Hayzlett
Ukuba ukhe wazintyintya-ubukele uthotho lweTV kwiHulu okanye ujonge imovie kwiNetflix, uyisebenzisile ke ngaphaya kwaphezulu umxholo kwaye kusenokwenzeka ukuba khange uyiqonde. Ngokuqhelekileyo kubhekiswa njenge OTT kuluntu losasazo kunye netekhnoloji, olu hlobo lomxholo luthintela ababoneleli beTV bakudala kwaye basebenzise i-Intanethi njengesithuthi ukusasaza umxholo njengesiqendu samva Izinto angamazi okanye endlwini yam, kunjalo Downton Abbey.
Itekhnoloji ye-OTT ayisiyi kuvumela kuphela ukuba ababukeli babukele imiboniso bhanyabhanya kunqakrazo lweqhosha, kodwa ikwabanika nenkululeko yokwenza oko ngokwemigaqo yabo kakhulu xa befuna. Khawucinge nje okomzuzwana. Kukangaphi kwixa elidlulileyo apho kuye kwafuneka ukuba uqubude ngaphandle kwezicwangciso kuba bekungekho ndlela uza kuphoswa kukugqibela kwesizini yakho oyithandayo?
Impendulo mhlawumbi ngaphambi kokuba ii-VCRs kunye nee-DVRs zaziswe- into endizama ukuyithetha kukuba indlela esisebenzisa ngayo imithombo yeendaba itshintshe kakhulu. Itekhnoloji ye-OTT ikhululile izithintelo phakathi kwabanikezeli bokuqukethwe kunye nabasebenzisi ngelixa inika abathengi ukufikelela kwiinkqubo zokuzonwabisa abazilindeleyo kwifilimu enkulu nakwizitudiyo zeTV. Kwakhona, ngaba ndikhankanyile ukuba isimahla sorhwebo?
Phambi kokungeniswa komxholo we-OTT-ireferensi yokuqala eyaziwayo kweli xesha yayikwincwadi ka-2008 Intshayelelo kwiiNjini zoPhando zeVidiyo nguDavid C. Ribbon noZhu Liu, Imikhwa yababukeli kumabonwakude ihleli injalo kule minyaka idlulileyo. Ngamafutshane, uthenge umabonwakude, uhlawule inkampani yentambo ngokufikelela kwisitishi seziteshi, kunye ne-voila, ubunomthombo wokuzonwabisa ngokuhlwa. Nangona kunjalo, izinto zitshintshile kakhulu njengoko abathengi abaninzi bayinqumle intambo kunye naziphi na iimfuno ezibekwe kubo ziinkampani zentambo. Ngokwe-2017
Ngokutsho kwe2017 survey eqhutywa yiLeichtman Research Group, Inc., ama-64% emizi eli-1,211 54 ekwenziwe uphando ngayo bathi basebenzisa inkonzo enje ngeNetflix, iNkulumbuso yeAmazon, iHulu, okanye ividiyo ekwimfuno. Ikwafumanise ukuba i-28% yabaphenduli bathi bahlala bengena kwi-Netflix ekhaya, phantse kabini isixa (iipesenti ezingama-2011) ababuya ngo-1. INetflix yayinababhalisi abasasazwayo abangama-98.75 yezigidi kwihlabathi liphela. (Nantsi into epholileyo ishati ibonisa indlela eya kulawulo lwehlabathi.)
Ngelixa i-OTT ibone ukukhula okukhulu ekuthandeni phakathi kwamakhaya kwihlabathi liphela, indawo enye endiyibonileyo apho ifumene khona ukutsha kutsha nje ngaphakathi kuluntu lweshishini. Kunyaka ophelileyo okanye njalo, ndibone inani lemibutho yamkela itekhnoloji ye-OTT njengendlela yokubonisa ulwazi lwabo okanye yokufikelela komnye umntu ngesaziso somzuzwana. Obu buchule bubaluleke kakhulu phakathi kwabaphathi abaxakekileyo abafuna ezona nkcukacha zihlaziyiweyo nokuba bakuphi ngelo xesha.
Omnye umzekelo ophambili yile I-C-Suite TV, ethi idlale umboniso wam weTV C-Suite noJeffrey Hayzlett. Kwangoko kulo nyaka, ijelo leshishini elifunwayo lenze intsebenziswano kunye Ukufikelela kwiTV, "uthungelwano oluninzi lwamajelo olonwabo kunye neqonga lokusasaza umhlaba wonke," ukusasaza umboniso wam kumabonakude kwizikhululo zeenqwelomoya ezinkulu ezingama-50 eUnited States nakwihotele ezingaphezu kwesigidi esinye kwilizwe liphela. Kuyachulumancisa ukubona inkqubo yam ifumana ukubonakala okongezelelekileyo, ngakumbi ngabantu ekujoliswe kubo endifuna ukufikelela kubo.
Ngokoluvo lwam, izikhululo zeenqwelo moya kunye neehotele ngokungathandabuzekiyo zezona ndawo zibalaseleyo zokubamba ingqalelo engahambanga yabakhenkethi beshishini abahlala befumanisa ukuba kuphela ixesha labo lokuphumla emini ngelixa belinde ukubamba inqwelomoya okanye ukuphumla kwigumbi lokungenisa ihotele (yithathe komnye umntu ngubani owazi kakuhle oku).
Ngaphambili, ukuba umphathi wezorhwebo ufuna ukubukela nayiphi na imiboniso yeshishini, kuya kufuneka ayenze "indlela yakudala" yokuyijonga ngexesha elithile. Kodwa ngokwaziswa kwetekhnoloji ye-OTT, banokufikelela kwinkqubo ehlangabezana neminqweno yabo kumaxesha abo.
Ndiqinisekile ukuba itekhnoloji ye-OTT iya kuqhubeka nokukhula kude kube lixesha elizayo njengoko sisiba luluntu oluqhubele phambili ngokwamanani. Oku kukhula kuya kwenza amashishini kunye nabathengi ngokufanayo ukunxibelelana kwinqanaba lehlabathi ngaphandle kwezithintelo esabelwe zona ngababoneleli bekhebula ixesha elide kakhulu. Njengemfuno yokufikelela kwangoko kwinkqubo yolonwabo kunye neyemfundo inyuka, kuyakonwabisa ukubona ukuba itekhnoloji ye-OTT izakusisa phi. Andazi ngawe, kodwa ndiza kulungisa ukuze ndifumanise.
tags: amazon primeI-C-Suite TVC-Suite noJeffrey HayzletthuluIqela lophando leichtmanNetflixOttngaphaya kwaphezuluUkufikelela kwiTVividiyo ngokufunwayo
UJeffrey Hayzlett ngumabonakude wokuqala kunye nomsasazi werediyo C-Suite noJeffrey Hayzlett kwaye Iimbono zolawulo kwi-C-Suite TV kunye Lonke ishishini noJeffrey Hayzlett KwiC-Suite Radio. UHayzlett ngusaziwayo oshishino lwehlabathi, isithethi, umbhali othengisa kakhulu, kunye noSihlalo weC-Suite Network, ikhaya elilelona lizwe linamandla kwiinkokeli zeC-Suite. Nxibelelana noHayzlett Twitter, Facebook, LinkedIn, okanye Google.